Nahazo ny Palme d’Or Tany Cannes ilay Japoney Hirokazu Kore’eda. Ireto santionany fohy amin’ny sarimihetsika notontosainy · Global Voices teny Malagasy
Nahazo ny Palme d'Or Tany Cannes ilay Japoney Hirokazu Kore'eda. Ireto santionany fohy amin'ny sarimihetsika notontosainy
Voadika ny 29 Jona 2018 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Română , русский, 繁體中文, Italiano, English
Soratra: “(tale Hirokazu Kore'eda), mpandresy tamin'ny Fetiben'ny Filma Palme d'Or Cannes. Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube ofisialin'ny GAGA (mpaninjara sy mpampiroborobo ny ‘Shoplifters’ na ‘Une affaire de famille’ amin'ny teny frantsay).
Tamin'ny volana Mey teo i Hirokazu Kore'eda no tale Japoney voalohany nahazo ny Palme d'Or tamin'ny fetiben'ny filma tao Cannes tao anatin'ny 21 taona. Io no fotoana fahenina nanendrena azy hifaninana tao Cannes; nahazo ny lokan'ny mpitsara tao Cannes ilay Japoney mpanatontosa tamin'ny taona 2013 tamin'ny alalan'ny sarimihetsika “Tel père tel fils” [Taha-dray].
Fetiben'ny filma fanao isan-taona any Cannes, Frantsa ny Fetiben'i Cannes izay heverina ho anisan'ny fetin'ny sarimihetsika manan-kaja indrindra manerana izao tontolo izao. Vitsy dia vitsy ny isan'ny sarimihetsika fantenan'i Cannes hifaninana manokana ao isan-taona. Ity Fetibe ity no nanandratra ireo mpanatontosa sarimihetsika maro, toy ireo nahazo ny lokan'ny palme d'or teo aloha ahitana ny “The Piano” notontosain'i Jane Campion, ‘Pulp Fiction’ notontosain'i Quentin Tarantino ary ny ‘The Third Man’ (Ilay lehilahy fahatelo) notontosain'i Carol Reed.
Ny Japoney mpanatontosa farany nahazo ny Palme d'Or dia i Shohei Imamura avy amin'ny Andiany Japoney vaovao, tamin'ny sarimihetsiny mitondra ny lohateny hoe The Eel [Ny amalona].
Tamin'ity taona ity, nahazo ny loka Palme d'Or i Kore'eda noho ny sarimihetsiny ‘Shoplifters‘ na “Une affaire de famille” [Mpangalatra eny an-talantalana na raharaham-pianakaviana]. Sarimihetsika izay lazain'i Kore'eda fa niainga avy amin'ny zava-misy marina, mifanerasera amin'ny mpiara-miasa amin'ny Kore'da ireo kintan'ny sarimihetsika toa an'i Lily Franky sy i Kirin Kiki ary milaza ny tantaran'ny fianakaviana mpangalatra iray miaina eo antokonam-baravaran'ny fahantrana ary miady mafy mba ho velona ao Tokyo.
Manavatsava ireo karazam-pifandraisan'ny fianakaviana ny sarimihetsik'i Kore'eda sady manadihady ny fiainan'olombelona. Na dia ampitahaina amin'ny Japoney mpanatontosa sarimihetsika antsoina hoe Yasujiro Ozu aza i Kore'eda dia nanambara fa amin'ny maha-mpanatontosa azy dia misy hitoviana kokoa amin'i Ken Loach ny ataony, Britanika mpanatontosa sarimihetsika sosialy-realista izany, izay manana fironana natioralisma mikendry “hipika sary ny marina amin'ny fotoana iray”.
Ny sasany manolo-kevitra fa ny ‘mpangalatra an-talantalana’ dia nokendrena ho tsikera fanehoan-kevitra amin'ny hantsana ara-toekarena misy ao Japana izay mihalalina tao anatin'ny roapolo taona, raha tsy nihetsika ny karama.
Nokendrena hiteraka fihetseham-po tao Japana ny “shoplifters’ (mpangalatra an-talantalana). Ohatra, nitsikera ny sarimihetsik'i Kore'eda i Takasu Katsuya mpanakarembe amin'ny fandidiana orona (fanamboarana tarehy), nilaza hoe:
Tsy henatra azo maneran-tany ve ny olona Japoney iray nahazo loka noho ny fanaovana sarimihetsika fianakaviana Japoney mpangalatra am-pivarotana? Ohatra iray hafa milaza fa mitsontsorika ny firenena.
Ho setrin'ny tifitr'i Takasu sy ny hafa dia nilaza tamin'ny tafatafa iray vao haingana tao amin'ny klioban'ny Masoivohom-baovao Vahiny ao Japana i Kore'eda:
Tsy fitaovana hiampangana na hampitana hafatra manokana ny sarimihetsika. Raha mamintina ny sarimihetsika ho izany isika, dia ho very ny fanantenana rehetra amin'ny sarimihetsika hitera-dresaka misy lanjany kokoa. Tsy nanao sarimihetsika mihitsy aho hiderana na hanakianana zavatra iray. Fanaovana propagandy ny fanatontosana karazana horonantsary tahaka izany.
Taorian'ny nahazoany ny Palme d'Or tamin'ny volana Mey dia nolavin'i Kore'eda ihany koa ny fanasan'ny minisitry ny kolontsaina japoney mba hihaona aminy sy hahazoany fankatoavana, nanazava hoe:
Rehefa nandinika ny lasa aho izay nahatonga ny indostrian'ny sarimihetsika ho tafaray amin'ny “tombontsoam-pirenena” sy ny “politikam-pirenena”, dia mieritreritra aho fa ny fihazonana ny elanelana mazava miala amin'ny fahefan'ny governemanta no zavatra mety atao.
Tsonga vitsy amin'ny filman'i Hirokazu Kore'eda
Hatramin'ny taona 1991 dia nanao sarimihetsika sy horonantsary fanadihadiana amin'ny fahitalavitra miisa 18 ny fitambarany i Hirokazu Kore'eda. Ny ankamaroan'izy ireo dia mampiasa endrika realista hijerena ny fiainan'olombelona, matetika eo anivon'ny fianakaviana.
Avy amin'ny boky nosoratan'i Teru Miyamoto, mpanao tantara foronina, ny ‘Maborosi’ (‘alonalona’ na ‘afon'angatra’) dia milaza ny tantaran'ny tanora reny iray, maty vady taorian'ny famonoan-tena noho ny antony tsy mazava nataon'ilay vadiny, izay nanambady indray sy nifindra tany amin'ny saikanosin'i Noto. Araka ny famintinan'ny New York Times:
Amin'ny fijerena ilay sarimihetsika, izay vitsy resaka sy ahitana tsipalopalotra hatrany ny tontolo Japoney, toy ny miditra ao an'eritreritry ny mpilalao fototra sy mahita avy amin'ny fijeriny ny tsirairay, na dia tsy mahafantatra azy akory aza.
Ny “firafitra tatami” anaty trano ampiasain'i Kore'eda ao anatin'ilay sarimihetsika, miaraka amin'ny fifantohany amin'ny mpiantsehatra tsirairay sy ny fiainam-pianakaviana no nahatonga ilay fampitahana tamin'i Yasujiro Ozu, mpanatontosa.
After Life – Ankoatra (ワンダフルライフ, 1998)
Ao amin'ity sarimihetsika tamin'ny taona 1998 ity, miditra any an-danitra amin'ny alalan'ny fifantenana ireo fahatsiarovany tsara indrindra izay maty vao haingana — ny fahatsiarovana ireo fotoana mahafaly ireo no hiainany any amin'ny mandrakizay. Niasa ho mpiasa birao manoro hevitra ireo maty vao haingana ireo izay tsy afaka manapa-kevitra amin'ny fahatsiarovana rehefa mahatsiaro ny lasa izy. Raha nanoratra ny tantara ‘Ankoatra’ i Kore'eda Hirokazu, dia niantsafa tamin'olona miisa 500, ary nanontany tamin'izy ireo mba hisafidy tsiaro iray tiany hotadidiany mandritra ny andro sisa iainany.
Nosoratana tamin'ny taona 1999, hoy i Roger Ebert:
Nahazo ny zo hoheverina ho tahaka an'i Kurosawa, Bergman ary ireo homanista goavana hafa ao amin'ny sinema i Kore'eda, amin'ity sarimihetsika nivoaka tamin'ny taona 1997 mitondra ny lohateny hoe Maborosi ity. Mahasahana ny misiterin'ny fiainana ny sarimihetsiny, ary mandrisika antsika hieritreritra ny antony maha eto antsika, sy izay tena mahasambatra antsika.
Nobody Knows – Tsy misy mahalala (誰も知らない, 2004)
Mifototra tamin'ny zava-misy marina, mitantara ny tantaran'ireo ankizy efatra nilaozan-dreniny — nefa tsy hita izay rainy — tao amin'ny trano fonenana iray tao Tokyo ny “Nobody Knows” (Tsy misy mahalala). Manorina ny fianakaviany manokana ireo ankizy ireo hiavotan-tena rehefa tsy hita ny ray aman-dreny sy ny olon-dehibe. Mampiseho ny fomba nahatapahan'ny fifandraisana ara-tsosialy amin'izao fotoana izao ao Japana ilay sarimihetsika.
Still Walking – Mbola mandeha an-tongotra (歩いても 歩いても, 2008)
Ao anatin'ny toerana anatiny iva sy fiainam-pianakaviana, ny ‘Still Walking‘ nivoaka tamin'ny taona 2008, ihany koa dia nitarika mankany amin'ny fampitahana amin'i Ozu. Nitranga nandritra ny faran'ny herinandro raha nivory ny fianakaviana mba ho fahatsiarovana ny maty iray, mandinika ny fomba fifandraisan'ny fianakaviana ny “still walking’ — na fisafidianana tsy hifandray. Hoy i Peter Bradshaw:
Tsy toy ny tantaram-pianakaviana noforonina avy amin'ny tantara tsangana Britanika na Amerikana ahitana fifamaliana na famakian-dovia. Voafehy ao anatin'ny fahalalam-pomba sy fifanajana ny lonilony sy hatezerana .Saingy, raha ny hevitro, dia manambara ny marina momba ny fiainana tena izy sy ny fiainan'ny fianakaviana rehetra na aiza na aiza izany[…]
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny sarimihan'i Hirokazu Kore'eda ianao dia manana torolàlana tsara dia tsara amin'izany ny British Film Institute (BFI).